स्व. राजा बिरेन्द्रले “तिमी जस्तै युवा देशको लागि खाँचो छ” भन्दै सम्मान गरेका ब्याक्ति आज यस्तो हालतमा (भिडियो) - Sidha News
स्व. राजा बिरेन्द्रले “तिमी जस्तै युवा देशको लागि खाँचो छ” भन्दै सम्मान गरेका ब्याक्ति आज यस्तो हालतमा (भिडियो)
काठमाडौं । मोरङको लेटाङमा एक जना नेपालीले काठै काठको साइकल बनाएका छन । करिब पैतिस बर्ष अगाडी बनाएको साइकलको आफ्नै कथा अनि साइकल बनाउने मणिहर्क राईको ब्यथा छ । उनले उक्त काठको साइकल बनाएपछि तत्कालीन राजा बिरेन्द्रले उनलाई नगद सहित सम्मान पनि गरेका थिए ।
उनले सम्झिए राजाले भनेको “तपाईंको हाम्रो देशलाई खाचो छ” शब्द । तर राजा नै नरहेपछी त्यो आशा निरासामा बदलियो । सानैदेखि आफैले हरेक सामान घरमै काठबाट निर्माण गर्ने मणिहर्क राई जुनसुकै सामान सारै राम्रो र सुन्दर बनाउछन । काठकै काममा गरेको धेरै बर्ष बिताएका उनी भन्छन “मलाई कसैले सहयोग गर्ने हो भने म विश्व चकित पार्ने खाले सामान काठबाटै बनाउछु” ।
घरमै फर्निचर राखेर गाउलेले केही बनाउन दिएमा घरबाटै बनाइदिन्छन । उनले काठको साइकल करिब ३५ बर्ष अगाडी कसरी बनाए होला त१ अचम्म लाग्न सक्छ तर बास्तबिकता यस्तो छ । तेतिबेला कसै कसैले मात्र साइकल चलाउथे साइकल चढ्ने मान्छे गाउकै धनी र ठूलो हुन्थ्यो । जस्तो कि अहिले कार चढ्ने मान्छेलाई सबैले धनी भन्छन जो कोहिले चढ्ने सम्भब पनि हुदैन । अहिले कार जस्तै थियो तेतिबेला साइकल ।दिनरात काम गरेर दुख गरेर पैसा जम्मा गरेर मणिहर्क राइले पनि एउटा साइकल किनेका रहेछन ।
दुख गरेर किनेको साइकल घरबाटै राती चोरी भएपछी धेरै रोएका उनले तीन चार दिन त रुदारुदै खाना पनि खाएनछन । धेरै खोज्दा कतैपनी साइकल नभेटेपछी उनले आफै साइकल बनाएर चढ्ने निधो गरेर करिब तीन महिना लगाएर एउटा साइकल काठैकाठले बनाएर कुदाए ।
काठैकाठको साइकल ५० केजिको भएपछी त्यो कुदाउन गार्हो भयो । त्यसपछी फेरि त्यो साइकलको सबै कुरा घटाएर ३५ केजिको बनाएपछी उनले त्यो साइकल कुदाएको अहिले पैतिस बर्ष भइसकेको छ र झै त्यही साइकलमा हिडडुल गरिरहेका बताउछन उनी ।
सुपर अनलाइन टिभीको टिम उनको घर लेटाङ पुग्दा उनले त्यो साइकलमा चढेर कुदाएर नै देखाए तल भिडियोमा हेर्न सक्नु हुन्छ । उनले काठबाटै धेरै कुराहरु बनाएका छन । उनको घरमा काठबाट निर्मित सामानहरु धेरै देख्न सकिन्छ । काठबाटै बनाएको धान झार्ने मेसिनले त उनले सिजनमा लाखौ कमाउछन । काठबाट निर्मित साइकल कसरी चल्छ अनि कस्तो छ त ? भिडियोमा हेर्नुहोस: